WeChat : Tsy Hampiseho Ny Dokan’ny BMW Amin’ireo Shinoa Mpanjifa Azy Raha Mihevitra Azy Ireo Ho Mahantra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Febroary 2015 4:20 GMT
Sary nafangaro nalaina voalohany tao amin'ny Facebook. Azo ampiasaina.
Manorisory olona marobe ny doka tsy niriana miditra amin'ny findainy. Raha toa ny orinasa iray mpanao akanjo ka mampiasa ny voka-pandalinana sy angon-drakitra goavana mba handrafetana doka halefa ho an'ny mpanjifa, dia azo raisina ho toy ny fisisihana amin'ny fiainana manokana koa izany.
Rehefa nandefa doka hihodinkodina any anatin'ny faribolan'ireo namana akaiky ny WeChat tamin'ny 25 Janoary, tohina tamin'ilay doka ho an'ny mpanamboatra fiara BMW ny sasany tamin'ireo Shinoa mpampiasa ity fandefasana hafatra ity, tsy hoe satria hitan-dry zareo ho misisika loatra na diso natao tsara tefy ilay izy — fa satria tsy afaka mahita an'ilay doka akory ry zareo. Ampangain-dry zareo ho manavakavaka ny mpanjifa kely fidiram-bola ny WeChat amin'ny fanoloany an'ilay dokan'ny BMW amin'ny iray hafa mampiseho “smartphones” na Coca-Cola.
Maro amin'ny lonilonin'ireo mpampiasa ny WeChat no valy bontana ho an'ilay hafatra niparitaka be nanazava ny fomba fampiasàna ireo angon-drakitra goavana ao an-damosin'ireny doka tsara tefy ireny. Tamin'ny endrika sary no nivezivezen'ilay hafatra tety anaty aterineto :
Lazain-dry zareo fa ilay doka mivezivezy any anatin'ny faribolan'ireo namana akaiky ao amin'ny WeChat dia mifototra aminà voka-pandalinana ireo angon-drakitra goavana, amin'ny fijerena ny hametrahana ny fiteny sy ny sary nampiasaina ho ao anatin'ilay faribolan'ny mpinamana. Mampiasa ny antsoina hoe “intelligence artificielle” ilay teknolojia, izay afaka mandalina mamantatra feo sy sary. Mifototra amin'ny fanandramana ny resaka “intelligence artificielle” ilay ambara ho tolotra fanaovana doka, izay novokarina avy ao anatin'ny [orinasa reniny] Tencent, efa ela tany aloha tany. Ity no valiny [mikasika ireo doka]: ho an'ireo izay manana fidiram-bola ambonin'ny iray tapitrisa yuan isan-taona [eo amin'ny US $150,000] ary afaka mandany bebe kokoa, mahazo ilay doka avy amin'ny BMW ry zareo; ho an'ireo afaka mividy Xiao Mi iray [marika finday vokarina ao an-toerana], mahazo ny Vivo ianao [marika “smartphone”] ; ary ho an'ireo sady tsy afaka ny hividy Xiao Mi na Red Mi, ny doka Coco Cola no azonao. Ho an'ireo izay manana fotoana hitafatafàna ao anatin'ny faribolan'ny mpinamana nefa tsy afaka ny hahita na dia doka iray aza, ny hafatra avy amin'ny WeChat dia hoe: miasà mafy raha toa ianao tsy manam-bola, aza mandany fotoana mamerina mamahana ny findainao.
“Our Hui Zhou” (@我们的惠州), mpampiasa ny Weibo, tranonkala miendrika Twitter, no anisan'ireo izay namerina namahana ny rohim-baovaony hijerena raha toa ka mety hiditra ihany ilay doka avy amin'ny BMW :
Mijaly saina taorian'ny namerenana namàhana nandritry ny tontolo andro ny rohim-baovaon'ny faribolan'ny mpinamana kanefa tsy mbola nahita foana izay dokan'ny BMW… Tena mifangaro voraka be loatra ny doka mandeha any anaty faribolan'ny mpinamana, ary dia voahilikilika ireo izay tsy manana fidiram-bola tahaka ahy.
Ma Weiwei (@马薇薇不算是昵称吧) tsy afaka nahita doka mihitsy tao anatin'ny faribolan'ny mpinamana WeChat misy azy. Naneho hevitra tamin-keso izy tao amin'ny Weibo:
Nilaza ry zareo fa nandefa doka tao amin'ny faribolan'ny mpinamana ny WeChat androany. Amin'ny maha-iray amin'ireo tsy mba afaka nahita ilay doka, nahatsapa ho nahilikilik'ilay fampiasa aho. Tsy misy BMW, na smartphone, hatramin'izay doka Coca-Cola t%&y any aza – amin'ny maha-mpilaza tantara ahy ao anatin'ny faribolan'ny mpinamana misy ahy izay tsy mizesta aminà lamaody na fanasàna ary tsy mba mandray anjara aminà hetsika fifampivarotana ety anaty aterineto, tsapako ny haratsian-toetran'ny fandraharahana ety anaty aterineto natao ahy.
Mahaliana ny mahita ny fanakianan'ireo Shinoa mpampiasa serasera ny fampiasàna ny angon-drakitra goavana any anaty dokam-barotra ho toy ny “fanavakavahana” raha toa kosa ireo tandrefana nampiakatra ny feony tamin'ny fanakianana ny fanimbazimbàn'izy io ny fiainana manokan'ireo mpampiasa. Raha ny tranga manjo an'i Shina, voaara-maso daholo ny hetsika rehetra ety anaty aterineto. Ao anatin'ity Panopticon virtoaly ity, tsy afaka miteny manohitra ny fanarahamaso ireo voafonja, saingy dia ho araha-maso ihany ry zareo anefa, fa farafaharatsiny mba afaka mitaky fomba fikarakaràna mitovy.